Clinic 360 Aesthtic & Beauty Center | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Clinic 360 Aesthtic & Beauty Center | Kamayut
Clinic 360 Aesthtic & Beauty Center
Clinic 360 Aesthtic & Beauty Center ဆိုင်ကို အမှတ်- ၀၁၀၊ တိုက်- စီ၊ မြေညီ၊ နှင်းဆီလမ်း၊ ယုဇန အဝေးပြေး ကားဝင်း အတွင်း၊ ခြောက် ရပ်ကွပ်၊ ကမာရွတ် မြို့နယ် မှာ ဖွင့်လှစ် ထားတာ ဖြစ်ပါသည်။
Clinic 360 ဆိုင်သည် ကျယ်ကျယ် ၀န်းဝန်း နဲ့ ခေတ်မှီ လှပသော ဒီဇိုင်းများ ဖြင့် သေသေ ချာချာ ပြင်ဆင်ထား တာကြောင့် ဆိုင်အတွင်း ထဲကို ၀င်လိုက်တာနှင့် စိတ်ကြည်နူး မှုကို ရရှိ စေမှာ ဖြစ်ပါသည်။ ဒီဆိုင် တည်နေရာ လေးက အေးအေး ချမ်းချမ်း ရှိပြီး၊ ပတ်ဝန်း ကျင်လည်း ကောင်း သွားလို့ လာလို့ လည်း အဆင်ပြေတဲ့ နေရာ မှာ ဖွင့်လှစ် ထားတာ ဖြစ်ပါသည်။ ဆိုင်ရဲ့ ၀န်ဆောင်မှု ကလည်း ညွှန်းစရာ မလိုအောင် ကောင်းပါသည်။ ဆိုင်ဝန်ထမ်း များလည်း ဆိုင်အတွင်းထဲ ကို ၀င်လိုက်တာနှင့် အပြုံး ကိုယ်စီ နှင့် ကြိုဆိုကြပြီး၊ စိတ်ရှည် လက်ရှည် ဖြင့် ၀န်ဆောင် မှုများ ကို ရှင်းပြပေးကာ၊ လာရောက် အားပေးသော ဖောက်သည် များ ကို စိတ်ကျေနပ် မှု အပြည့် ပေးစွမ်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။
Clinic 360 မှာ အဓိက ရရှိနိုင် တဲ့ ၀န်ဆောင် မှုတွေ ကတော့ နိုပ်နှယ်ပေးခြင်း၊ မျက်နှာ နှင့် ခန္တာကိုယ် ပေါ်က အညစ်ကျေး များကို သန့်စင် ပေးခြင်း နှင့် နိုပ်နယ် ပေးခြင်း၊ ဆံပင် ဖြောင့် ၊ ဆံပင် ကောက်၊ အရောင် ဆေးဆိုး ခြင်း၊ လက်သည်း ခြေသည်း အလှပုံ ဖော်ခြင်း၊ လေဆာ ဖြင့် မျက်နှာ ပေါ်က အရေး အကြောင်းများ အစွန်း အထင်းများ ကိုချေဖျက် ပေးခြင်း၊ မျက်လုံး အလှပုံဖော်ခြင်း၊ ရေနွေး ချိုးခန်း စီစဉ်ပေး ခြင်းများ လည်း ရရှိနိုင်ပါသည်။ Clinic 360 မှာ အသုံးပြုတဲ့ ပစ္စည်း တွေက ယုံကြည် စိတ်ချရပြီး၊ အလှအပ အတွက် ဆိုရင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ထုတ် Dec Leor တံဆိပ်၊ ဆံပင် နှင့် ပတ်သတ်ပြီး L’Oreal professional ကိုသုံးပေးပြီး လက်သည်း ခြေသည်း အတွက် တော့ OPI ထုတ်ကုန် ကို သုံးပေးထားပါသည်။
Clinic 360 Aesthtic & Beauty Center သည် အလှအပနှင့်ကျန်းမာရေးပြသနာအမျိုးမျိုးကို အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော ခေတ်မီစက်ပစ္စည်းများ အသုံးပြုကာ ကျွမ်းကျင် ဆရာဝန်များကိုယ်တိုင် စနစ်တကျ စစ်ဆေးကုသမှုများပြုလုပ်ပေးနေတဲ့ နေရာတစ်နေရာဖြစ်ပါတယ်။
10:00 AM - 07:00 PM ( ပိတ်သည် တနင်္လာနေ့ )
No.010, Building-C,(GF) Hnin Si St,Yuazna Complex, Kamayut Township.
အနီးအနား ဆင်မလိုက် မှတ်တိုင်3မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
Clinic 360 is conveniently located at No.010, Building-C, (GF) Hnin Si Street, Yuzana Highway Complex, Ward (6), Kamayut Township, and Yangon. The Clinic is spacious and beautifully decorated withamodern stylish. The Clinic is located onaperfect spot where the surrounding neighborhood is extremely peaceful. Service is superb. All servers greeted us with simile, ready to serve and answer the entire questions whenever the customers have questions regarding the service. Clinic 360 is mainly provide Massage, Facial & body massage, Spa, Hair Saloon, Nail, Light Plastic surger, Epilation, Eye Beauty and Sauna. They are using high quality product for all services. Especially, they are using for beauty Dec Leor brand (French), L’Oreal professional for hair and OPI products for nail. The Clinic 360 Aesthtic & Beauty Centre isaplace where beauty and health related problems can be assessed and be treated by professional doctors using apparatuses of latest technology.
Eye Beauty, Beauty Others
Make Up Nyan Nyan ( Hledan )
The Force Fitness Club
Hi Hair Salon ( I )